30 Sep 2020 | बुधबार, १४ असोज, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
सोमबार, १९ साउन, २०७७
काठमाडौं । प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसले कागतीपानी र भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । यसले इन्फेक्सन वा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जस्ता फ्लुविरुद्ध लड्नका साथै प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि राम्रो बनाउने गर्छ ।
एन्टिअक्सिजन बढी भएका खानेकुरा बढी खाने गर्नुपर्छ । जस्तै, फलफूल, भिटामिन ए, सी र ई भएका खानेकुरा । नियमित एक्सरसाइज गर्नाले पनि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बन्छ ।
कोरोनाले शरीरको तापक्रम कम भएका मानिसलाई छिटो संक्रमण गर्छ । संक्रमण बढ्दा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने गर्छ । शरीरको तापक्रम बढाउन तातोपानी खान सकिन्छ । साथै, बाफ लिएर पनि शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
गाँजा र रक्सी खाँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने भ्रम मात्रै हो । धुमपान र मद्यपान सेवनले प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउने भएकाले यस्ता चिज सेवन गर्नुहुँदैन ।
नियमित रूपमा साबुनपानी र स्यानिटाइजरले हात धुने । बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने ।
संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई केही लक्षण देखिनासाथ अस्पताल जाने ।
भिडभाडमा नजाने र घरमै बस्ने । खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा मुख छोप्ने ।
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको भाउ
काठमाडौँ । आज सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलाको ९४ हजार ७०० रुपैयाँ तथा तेजाबी सुन
ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयका सबै सेवा बन्द
काठमाडौँ । ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयका सबै सेवा बन्द भएका छन् । कर्मचारीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरेको हो । कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै अर्क
‘कोरोनाको दशैं’ गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ । गायक बुद्दि श्रेष्ठ र गायिका कल्पना दाहालको आवाजमा रहेको गीतमा यादव देवकोटा (सरापे) र सुशिला निरौला (बिमली) को मुख्य अभिनय रहेको छ भने नवदुर्गा पौडेल, सन्तु गुरुङ, चन्दा बिडारी र स्वय
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीस्थित हुडिकोट हाइकिङसँगै दृश्यावलोकनका लागि पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको आफ्नै पिडा: खुला भयो होटल, छैनन् पाहुना
के तपाईलाई पानी पिउन आउँछ ?
एजेन्सी । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पानी पुगेन भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । पानीको कमीले शरीरभित्र मात्र होइन, शरीरबाहिर छालामा पनि नकारात्मक असरहरू देखा पर्न सक्छन् । कहिले धेरै, कहिले थोरै पानी खानु हुँदैन । खानेकुरा र पानीको मात्रा मिलाएर मात्रै सेवन गर्न जरुरी छ ।
काजु खानुका फाइदैफाइदा
महिनादिनसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेन क्यालिफोर्नियाको डढेलो, १५ हजार १७५ वर्ग किलोमिटर जङ्गल विनाश
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको जङ्गली क्षेत्रमा लागेको डढेलो महिनौसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
बेलायतले चार हजार वर्ष पुरानो इराकी एक मूर्ति फिर्ता गर्ने
कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउन झण्डै पाँच लाख शार्क मारिन सक्ने !
किन मुकेश अम्बानी आफ्नो साथमा न पैसा बोक्छन् न क्रेडिट कार्ड नै ?